गैर आवासीय नेपालीलाई (मातृभूमि) देश प्रतिको चिन्ता
वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले पठाएको ‘रेमिट्यान्स’ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकोमा दुईमत छैन । देशभरबाट दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम जारी रहँदा देशभित्र हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण निर्वाचनमा अहिले चहलपहल बढ्दो छ । तर, त्यो चहलपहलमा युवाको उपस्थिति भने अत्यन्तै न्यून छ ।
जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा चरम गरिबी छ, देशमा रोजगारीको अवसर छैन । अधिकांश युवाशक्ति आफ्नो जिविकापार्जन संगै, परिवारको सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत, विभिन्न देश मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडीमा छन् । जोस जाँगर सकिएका प्रौढहरू देश चलाउने नारा बोकेर मत माग्न घरघर चहार्दै छन् । गाउँघरमै भएका केही युवा पनि विरक्तिएर लागु औषधको कुलतमा फसेका छन् ।
बेरोजगारीकै कारणले समाजमा विभिन्न खाले विकृति बढ्नुका साथै, युवा बाध्यताले आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाईन्छ । यस्तो स्थितिमा विभिन्न सहरमा भौंतारिइरहेका युवाको संख्यासमेत जोड्दा तथ्यांक अझ गम्भीर बन्न सक्छ । हामी जस्ता युवा रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको खोजीमा छौँ । खाडी मुलुक हाम्रै युवाशक्तिले गरेको श्रमको भरमा सम्पन्न बन्दै छन् । तर हाम्रो सरकार र राजनीतिक दललाई भने युवाशक्ति बिदेसिएकोमा कुनै चिन्ता छैन ।
देश विकासमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनको संघारमा देशको नेतृत्व सम्हाल्न अगाडि आउनुपर्ने युवा भने खाडी लगायत विभिन्न राष्ट्रमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । देशकै लागि यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । यही हो, हाम्रो देशको यथार्थ !
भएका उधोग कलकारखानाहरू कति बन्द भए, बाँकी धरासायी छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू पालैपालो देश हाँक्छन् । युवाले किन रोजगारी पाउन सकेनन् ? जिल्लामा किन एउटा पनि उद्योग स्थापना हुन सकेन ?
देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने दलले युवा पलायनलाई रोक्ने प्रभावकारी उपाय र विकल्प खै ? हाम्रो विडम्बना, मातृभूमि देश चलाउने कुशल नेता छान्न समेत युवा गाउँघरमा छैनन् । जबसम्म राज्यले ठोस र प्रभावकारी योजनासहित अगाडि आउँदैन तब सम्म हाम्रा गाउँघर युवाविहीन रहने निश्चित छ । त्यसैले आफ्नो राष्ट्र, समाज र राजनीतिबारे विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमतावान युवाले समृद्ध राष्ट्र विकासका लागि त युवा नै राजनीतिमा आउनुपर्छ ।
साविक सिलुवा-२ हाल पूर्वखोला गाउँपालिका १ पाल्पा
यो बाम एकता हैन,यो त जनतालाई झुक्याउन बनेको कथित बाम एकता : परि थापा
मुस्लिम बाहुल्यता भएका ६ वटा देशहरु अमेरिका प्रवेशमा रोक